Ifulethi lasemaphandleni elibheke u-Franklin & Main St - I-Airbnb
Ifulethi lasemaphandleni elibheke u-Franklin & Main St
495 okushiwo abanye
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Jack
Sawubona! Siveze obala isitini esidala sasekuqaleni kanye nezitezi zokhuni oluqinile ngaphakathi. Sifake indawo yomlilo kagesi enosofa omkhulu othokomele khona kanye phambi kwayo. Sinayo i-cable TV enamashaneli ahlukahlukene enzelwe wena. Kukhona ikhishi eliphelele elinohhavini, isitofu, imicrowave nesiqandisi uma uzoshanela umpheki wakho wangaphakathi. Indlu yokugezela ineshawa kanye nobhavu, kanye ne-heater eyakhelwe ngaphakathi yokukugcina ifudumele! Lokhu kufaneleka kungaphezulu kwesitolo sekhofi!
Leli fulethi lisanda kulungiswa ngokuphelele. Lapho sidiliza izindonga, sabona izinkuni ezishile ezizungeze amafasitela nophahla. Sajula safunda kabanzi ngomlando wesakhiwo. Sathola ukuthi lalishile ngo-1878 futhi labuye lakhiwa ngo-1879. Umnikazi wesakhiwo ngalesi sikhathi wayehlala kuleli fulethi okwakuqale kulo umlilo. Yonke enye indaba kuleli fulethi elinomlando ikulungele uma ubhukha! Sicela Uqaphele: njengoba leli kuyifulethi lebhilidi elidala alinaso isimo sezulu esilawulwa ngabanye kodwa liqashwe yimina (Jack) ezingeni lokushisa elinethezekile kuwe! Qaphela: Uzozwa umsindo emgwaqeni! Lesi yisakhiwo esidala futhi umsindo ovela ku-main street uyangena! Uma lokhu kufakwa kuhlu kwenzeka ukuthi kubhukhiwe, nginabanye abangu-5 esakhiweni esifanayo okungenzeka bayatholakala! Nasi isixhumanisi: Airbnb.com/p/galenaapartments (Sicela usike, ukopishe, bese unamathisela)
4.80 out of 5 stars from 495 reviews
4.80 · 495 okushiwo abanye
Idolobha laseGalena ligcinwe ekubukekeni komlando futhi ihholo ledolobha lenza umsebenzi omuhle kakhulu wokuligcina. Kukhona izindawo zokudlela, amabha, nezitolo kude nefulethi. Ngezansi kuneBig Bill's okuyindawo yekhofi nesidlo sasemini. Kuthule phakathi nosuku lonke ukuze kungabikho ukuphazamiseka okukhulu ngenkathi ulapha.
Ngifake indawo engenakhiye efulethini ukuze ukwazi ukungena noma kunini lapho uthanda khona ngemva kuka-4pm. Ngizothumela inombolo yokungenela ngosuku olwandulela ukubhukhwa kwegumbi. Uma kukhona okudingayo ngicela ungazise! Zizwe ukhululekile ukuxhumana nami nganoma yisiphi isikhathi! Ikhaya lami ngelakho!
Ngifake indawo engenakhiye efulethini ukuze ukwazi ukungena noma kunini lapho uthanda khona ngemva kuka-4pm. Ngizothumela inombolo yokungenela ngosuku olwandulela ukubhukhwa kwegum…